काठमाडौं / बुधबार
बुधबार एकाएक एउटा तस्बिर भाइरल भयो । त्यो थियो– चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको । तस्विरमा पन्तलाई एउटा कारको पछाडि उभिरहेको देख्न सकिन्छ । कारमा झोला र केही किताब पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यही तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाइबल र केही राहत सामग्री बोकेर पन्त बारा पुगेको दाबी गर्दै धमाधम विरोध गर्न थाले ।यधपी भाइरल बनेको उक्त तस्बिर अहिलेको नभएर पुरानो भएको खुलेको छ । त्यो पनि अहिले चर्चा गरिएजस्तो बाइबल नभएर किताब–कापी भएको दाबी गरिएकाे छ ।
डिसेम्बर ५ मा वीरगन्ज कारागार भित्र रहेको समता स्कुलका विद्यार्र्थीहरुलाई पन्तले निःशुल्क कापी, झोला लगायत सामाग्रीहरु वितरण गरेकी थिइन् । त्यही फोटोलाई अहिले सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुले गलत प्रचार गरेको पाइएको छ । जुन कुराको अञ्जु पन्तले नै गएको डिसेम्बर ५ मा आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत यो तस्बिर सार्वजनिक गरेबाट पुष्टि हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर भाइरल भइरहँदा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासमेत हल्लाको पछि लागेर हेलो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई गुहार गर्न पुगेका छन् ।
हाम्रो समाजका केही धमिराहरूको मानसिकता कतिसम्म गिरेकाे छ भन्ने कुराकाे बलियो प्रमाण हो यो । विचराहरूलाइ दुःखमा परेकाे व्यक्तिले सहयोग पायो भन्ने भन्दा पनि विराेध गर्ने निहुँ कता छ भन्ने तिर्सना रहेछ । पूर्वाग्रहको पराकाष्ठाबाट प्रेरितहरूले मान्छेको जीवनलाइ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाइ प्राथमिकता दिन्छन् भनेको यही हो । कमल थापा वा उनका भराैटेहरूले कुनै अछुतकाे दैलाे टेकेका छैनन् हाेला तर हामी ख्रीष्टियनहरूले साँचाे मनले अछुत र हेपिएकाहरूकाे चाेटमा मलम लगाउँदा किन टाउकाे दुख्छ ? आफू केही नगर्ने अनि अरूले गर्दा पनि किन सहयाेग गरिस् भनेर गलत आराेप लाउन लाज लाग्नुपर्ने हो । फेरि सानाे सहयाेग पाउँदैमा कसैले पनि धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन भनेर बुझे पाे हुन्थ्याे । खै के ? खै के ???